Madaxweyne Kenyatta ayaa kordhiyay bandoowga guud ahaan Kenya, – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Madaxweyne Kenyatta ayaa kordhiyay bandoowga guud ahaan Kenya,
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amar ku bixiyay in la kordhiyo 21 maalmood oo lagu soo rogayo bandoowga wadanka oo dhan ilaa waagu ka dhacayo maadaama tirada maalin kasta cusub ee COVID-19 infekshanku uu kor u kacay, iyadoo 49 xaaladood oo cusub la diiwaan galiyay.
Tani waxay hadda keenaysaa infekshinka COVID-19 ee Kenya oo la gaadhey 830 halka dhimashaduna ay gaareyso 50.
Qoraal kooban oo Sabtidii ka soo baxay, ayuu madaxweynuhu sidoo kale ku soo rogay xayiraadda safarka iyo u bixitaanka aagga Magaaladda Nairobi, gobollada Kilifi, Kwale, Mombasa iyo Mandheera illaa 6-da Juun, 2020, oo ah isla taariikhda bandowga la filayo inuu dhammaado.
“Adduunyada oo dhan waxay dhex mareysaa dooxada hooska dhimashada,” ayuu yiri Madaxweyne Kenyatta xilli uu ku boorriyay dadka reer Kenya inay ka feejignaadaan cudurka.
“Waxaan dhexdayada ku leenahay cadaw naxariis daran oo aan cafin. Cadowgan wuxuu isku dayayaa inuu galo isagoo adeegsanaya albaab kasta, daaqad kasta, dalool kasta. Waxaan ka codsanayaa qofkasta oo reer Kenya ah inuu ku dhex dhuunto xunuunku si aanu inoo weeraraan dhammaanteen.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale amar ku bixiyay in la xiro xuduudaha Kenya ay la wadaagto Tansaaniya iyo Soomaaliya si loo joojiyo soo qaadista kiisaska cusub ee COVID-19 ee labada dal. Xadka ayaa kaliya u furi doona markab xamuul qaada. Dhamaan darawalada gawaarida xamuulka qaada waa inay maraan baaritaano kahor inta aan loo ogolaan Kenya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in maamulkiisu kaliya uusan ka shaqeyn doonin inuu nolosha ka ilaaliyo masiibada COVID-19, laakiin sidoo kale ay qorsheynayso sidii dalka looga soo kaban lahaa dhibaatada dhaqaale ee ay kala soo baxeyso dhibaatada.
Madaxweyne Kenyatta ayaa yiri “Waxaan soo bixi doonaa annagoo ogaanayna inaan ku haysanay awood aad u weyn midnimadeena iyo adkeysigayaasheena dad ahaan ayaa na arki doona xilligan adag.”
Wuxuu xusay in si ka duwan waddamada kale ee bilaabay fududeynta talaabooyinka xirida, Kenya uma baahna inay raacdo illaa ay ka yaraaneyso infekshannada COVID-19.
Waxaan idinka welwelsan ahay dhammaantiin, inaan ku laabto dhismaha dalkan. Si kastaba ha noqotee, waxaan awood u yeelan doonnaa oo keliya inaan sida ugu dhaqsaha badan u sameyn karno sida ugu dhakhsaha badan ee aan si mug leh u xakameyno koritaanka cudurrada, ”ayuu yiri Madaxweyne Kenyatta.
Previous articleWarbixintii ugu danbeysa COVID19 Itoobiya, 11 qof oo ka yimid jigjiga oo laga helay Xanuunka
Next articleWarbixintii ugu danbeysa COVID19 Soomaaliya
Sababaha Madax Xanuunka Keena Xilliga Soonka, Sida Looga Hortegi Karo Iyo...